Baphika eyokubhubha komhlaba namhlanje | IOL Isolezwe
Baphika eyokubhubha komhlaba namhlanje
Isolezwe / 21 December 2012, 2:05pm /
Kuthiwa yinqwaba yabantu esithutheleke ethempelini lama-Mayan eliseMexico. Ikhalenda lalesi sizwe liphela namhlanje ngo-Disemba 21, 2012. Kuthiwa lizobe selineminyaka engu- 5 125. Isithombe: SITHUNYELWE
LIBUKEKA kanjena ikhalenda lesizwe samaMayan, okucatshangwa ukuthi liqagula usuku lokubhubha komhlaba
Basho kanje abefundisi bamabandla ehlukene abakhulume naleli phephandaba, abebephendula umbuzo wokuthi ngabe liyabhubha ngempela yini namhlanje njengoba kukhona abacabanga lokhu.
UFata Smilo Mngadi webandla lamaRoma uthe ngokweBhayibheli akekho noyedwa owaziyo ukuthi umhlaba uzobhubha nini ngoba noJesu ukubeka kucace emibhalweni eyingcwele ukuthi nguNkulunkulu kuphela owaziyo.
“Labo abathi umhlaba uyagoqwa kusasa (namhlanje) bakhuluma okungesilo iqiniso ngoba uma ubheka encwadini Izenzo 1 ivesi lesikhombisa uJesu uyayikhuluma le ndaba kanjalo naku-Mark 13 kuvesi 32. Uyasho uJesu ukuthi akekho owaziyo usuku nehora ngisho izingelosi ezulwini kodwa nguBaba kuphela owaziyo. Okucacisa ngokusobala ukuthi akekho owaziyo ukuthi umhlaba uzobhubha nini,” kusho uMngadi.
UMfundisi Bheki Zungu webandla laseZayoni uthe yinto engekho ukuthi umhlaba uyabhubha futhi uNkulunkulu akazange athi uzotshela abantu uma esewugoqa.
“Imibhalo iyasho ukuthi uNkulunkulu uzothumela izifo ezingalapheki uma umhlaba usugoqwa kodwa lokho akusho ukuthi sizofa sonke kusasa. Sizokhuleka siphile ngoba akekho owaziyo ukuthi umhlaba uzogoqwa nini.
Abantu bazi kanjani ukuthi umhlaba uyagoqwa, kayikho leyo nto,” kusho uZungu.
Lolu valo lokubhubha komhlaba lusukela ekuhunyushweni kwekhalenda lesizwe sama-Mayan, esiseningizimu yeMexico, eSouth America.
Ngokwekhalenda lasemandulo lalesi sizwe, kuvela ukuthi usuku lokugcina noma lokuphela komhlaba nguDisemba 21 kuwo lo nyaka.
Akuveli ukuthi uzophela ngasikhathi sini noma kanjani.
Izazi ngempilo yamaMayan ziyakuphikisa lokhu njengoba zithi ikhalenda labo lichaza ukuphela kwempilo endala, okusho ukuthi ngemuva kukaDisemba 21 ngokwalesizwe kumele impilo iqale kabusha.
Ngenxa yala mahemuhemu okubhubha komhlaba abavakashi bamazwe sebethutheleke eChichen Itza, eMexico, ukuyokhuluma nabantu abangama-Mayan ngokubhubha komhlaba kodwa ama-Mayan wona athi umhlaba ngeke ubhubhe futhi bayaxakeka ukuthi abantu bakuthathaphi lokhu.
Ngokusho kwezazi zaleli khalenda lama-Mayan liphela namhlanje Disemba 21.
Ngisho amafilimu adlalayo aseke akungathekisa lokhu ethi umhlaba uyagoqwa ngo-2012, njenge-2012 ne-Apocalypse.
Lesi sizwe sasinekhalenda elinemifanekiso yokwahlukile okwakumele okuthile.
Kuleli khalenda kuvela ukuthi ngoDisemba 21 wusuku lokugcina ekhalendeni kanti ngalolu suku ama-Mayan ayezobe esebheke impilo entsha.
OSolwazi abazi kabanzi ngomlando wama-Mayan bathi lolu suku beluzobhekwa njengokuqala kwempilo entsha kuma-Mayan, hhayi njengokubhubha komhlaba njengoba abantu sebebabaza manje.